VaultPress Waxay Haysaa WordPress Amni | Martech Zone
VaultPress Waxay Haysaa WordPress Ammaan
Jimco, Nofeembar 4, 2011 Arbacada, Nofeembar 9, 2011 Douglas Karr
Waxaan fadhiyaa meesha Automattic waab at Blog World Expo (siphoning power) oo aan wada hadal weyn la yeelanay kooxda WordPress ee ku saabsan dhowr mashruuc oo aan ka soo shaqeynay iyo sidoo kale inaan ka wada hadalno isbeddelada iyo caqabadaha aan kula jirno macaamiisheenna. Mid ka mid ah welwelkaas ayaa ah amniga iyo keydka.
Waa wax lala yaabo in aan in muddo ah ku dhex jiray bulshada WordPress, laakiin wali aan maqlo barnaamijyo iyo codsiyo soo jiray muddo sannado ah oo aanan arag iyaga! Mid ka mid ah waa VaultPress. VaultPress waa adeeg aad ku dari karto bogaaga WordPress-ka ah ee iskiis u martigeliya kaas oo labadaba kormeeri doona amniga baloogga isla markaana sii wadi doona kaydinta socda ee nuxurka.
Waa kuwan muuqaalka guud ee VaultPress:
Si ka duwan adeegyada kale ee keydinta goobta, VaultPress dhab ahaantii waxay keydisaa keydka goobta sida aad u qorto… sida muuqaalka otomaatiga ah ee ku jira tifaftiraha WordPress. Aad u qabow!
Muuqaal kale oo weyn oo ka mid ah VaultPress ayaa ah inuu kormeerayo wixii isbeddel ah ee ku rakibaya lambarkaaga WordPress. Mar labaad, faa iidada tani waxay tahay isla qoyska Automattic ee ka soo koraya barxadda WordPress ayaa qoraya barxadda kormeerka ee hubinaysa inaad nabdoon tahay. Xayeysiinta xaasidnimada ah ama fiilooyinka leh nabadgelyada liidata ayaa badanaa marin u ah haakarisku inay galaan oo ay ku riixaan koodhadh bogag kale oo ka mid ah WordPress, taas oo ka dhigaysa boggaaga marin u ah kuwa sharka fala.
VaultPress waa adeeg lacag la siiyay, laakiin aad u jaban qorshayaal u dhexeeya $ 15 illaa $ 350 bishiiba (shirkad ahaan). Waxaan tijaabinayay MyRepono laakiin ma aheyn shey fudud oo la isticmaalo - marka waxaan u wareegay VaultPress!
Tags: automatticmyreponoxakamayntakeydinta wordpress